Izindaba - Kungani ukukhiqizwa kobhaka ngokwezifiso kune "MOQ"?
Ngikholwa ukuthi wonke umuntu uzohlangabezana nenkinga yobuningi be-oda eliphansi lapho efuna abakhiqizi ukwenza ngokwezifiso izikhwama zobhaka. Kungani imboni ngayinye inesidingo se-MOQ, futhi yini inani elilinganiselwe le-oda elincane embonini yezikhwama ngokwezifiso?
Ubuningi be-oda obuncane bojosaka abenziwe ngokwezifiso ngokuvamile busethwe ku-300 ~ 1000. Ukukhula kwefektri, kukhuphuka ubuningi be-oda elincane. Kunezizathu ezintathu eziyinhloko.
1. Izinto zokwakha. Lapho ifektri ithenga izinto zokusetshenziswa, kubuye kube nomkhawulo wobuningi obuncane be-oda. Izinto eziyinhloko ngokuvamile zinenani eliphansi le-oda lamayadi angama-300 (kungenziwa ojosaka abangaba ngu-400). Uma wenza izikhwama ezingama-200 kuphela, umenzi-ke kufanele aqhubeke nokusungula izinto zezikhwama ezingama-200 ezilandelayo;
2. Izindleko zesikhunta sangokwezifiso sosaka nojosaka, noma ngabe wenza ojosaka abayi-100 noma abayi-10,000, udinga isethi ephelele yokubumba, isikhwama esijwayelekile, ukuthuthukiswa kwesampula kanye nezikhunta kudinga izindleko zezikhunta zase-US $ 100 ~ 500, Okuncane ngobuningi be-oda , ukwabelana ngezindleko ngaphezulu;
3. Izindleko zokukhiqizwa ngobuningi kojosaka abenziwe ngezifiso: Izikhwama zingumsebenzi wezandla kuphela. Ubuncane besibalo, buhamba kancane ijubane labasebenzi bokukhiqiza. Ukujwayela inqubo nje, kuphelile. Izindleko zabasebenzi ziphakeme kakhulu.
Ngakho-ke, i-MOQ ixhunyaniswe nezindleko. Ngesikhwama esifanayo, uma wenza i-100, inani elilodwa lizoba cishe izikhathi ezi-2 ~ 3 ngaphezulu kune-1000.
Isikhathi Iposi: Sep-24-2020